Elalọ Ọrụ Na-edozi Ahụ Velashape | China Velashape Isi Contouring Nsukka na Suppliers
Mini Kuma nkebisi Pro 5-Na-1 ...
Kuma nkebisi Pro 5-Na-1 Isi ...
Mee ike & Ọkụ fa ...
Coolplas Cryolipolysis Abụba ...
Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 Igwe
Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 Ngwaọrụ jikọtara ọtụtụ teknụzụ nke Multipolar na Bipolar RF na Vacuum, 40K Cavitation na Lipolaser.
Multipolar na Bipolar RF na Agụụ
Multipolar RF dị elu na-ewepụta ike ọkụ nke ọma n'ime oyi akwa derma, ma na-achọ itinye ebili mmiri electromagnetic iji laghachi usoro usoro. Ọ na-enye nsonaazụ ọgwụgwọ dị mma na cellulite, ịkpụ ahụ na mmegharị collagen.
Ultrasound Cavitation: Nnukwu
Site na isi ụda olu dị ike, enwere ike ịgbanye ụda 40KHZ iji gbaa mkpụrụ ndụ abụba na ọsọ ọsọ ọsọ wee mepụta ọtụtụ akpa ikuku ikuku n'ime na n'èzí mkpụrụ ndụ abụba, na-enwe mmetụta dị ike na mkpụrụ ndụ abụba iji mepụta ọgbụgba na-agbasa ma gbasaa triglyceride n'ime glycerol na n'efu ọdụdụ asịd.
A maara dị ka laser dị nro, laser oyi ma ọ bụ ọgwụgwọ laser dị ala, lipolaser na-eji ọkụ ọkụ ọkụ 650nm laser na-acha uhie uhie iji banye n'ime akpụkpọ ahụ, mgbe a na-echepụta mkpụrụ ndụ abụba, mkpụrụ ndụ sel ahụ ga-emepụta pores iji hapụ acid fatty na glycerol. Mkpụrụ ndụ abụba ga-agba ọkụ ma ọ bụ kpochapụ site na nsị lymph na ọgwụgwọ infrared.
Ultrabox 6 IN 1 Cavitation RF Slimming igwe
Igwe ahụ nakweere ultrasonic wave iji nweta atụmanya a na-atụ anya nke iwepu abụba, nke bụ mmetụta Cavitation. Site na iji ihe abụba na-agba ume na-enweghị nchebe na anụ ahụ, igwe a na-egosi ọganiihu teknụzụ yana mmepe ọhụụ nke teknụzụ fatdissolving ụwa.
Cavitation RF slimming igwe nwere ike gbawara Cellulite ahụ. Na-elekwasị anya na ebili mmiri dị elu, ọ na-emepụta Cavitationeffect iji gbawaa Cellulite, site na ịmepụta obere micro egosipụta n'ime mkpụrụ ndụ abụba nke na-agbapụta ma mee ka abụba abụba mebie,
si otú na-ewepụta mmiri mmiri ya niile nke na-abaghị uru n’emebighị ihe ọ bụla ọzọ, dị ka akwara ọbara na sistem ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ahụ na-amata mkpụrụ ndụ abụba mebiri emebi na mmiri dị ka nsị wee gawazie wepụ ha n'ahụ site na sistemụ lymphatic na vaskụla. Ọzọkwa, ọ nwere ike ime ka anụ ahụ na ahụ sie ike, na-eme ka ike ahụ sie ike.
Ka ọ dị ugbu a, jigide ọdịdị ntorobịa gị. Anyị Cavitation system nwere igwe eji akwado ya, ihe nkpuchi ntutu isi nke ultrasonic, Bipolar / Tripolar ọgwụgwọ isi na ndi ozo ndi ozo. A nabatara igwe ndị ọrụ na 8 sentimita asatọ Ikanam Backlight Liquid kristal displayand mmalite igodo. LCD abụghị naanị maka ntọala ahụ, mana ọ na-egosiputa oke na oge ọgwụgwọ.
Kuma nkebisi Isi Contouring Machine
Kuma nkebi Isi Contouring Ngwaọrụ bụ sịntetik ọgwụgwọ usoro maka abụba Mbelata na ikpokọta redio ugboro, infrared ìhè na agụụ na n'ibu ala ịhịa aka n'ahụ, anọ teknụzụ na otu igwe.
Ike na-ekpo ọkụ n'ebe a na-agwọ ọrịa, na-eru na ebe abụba dị n'okpuru anụ ahụ. Mkpụrụ ndụ abụba na-agbaze na ebe a na-emeso ya n'oge ọgwụgwọ ka e wee belata oke abụba ahụ.
Oge redio (RF) nwere rollers abụọ nwere ike ịbanye n'ime oyi akwa nke 0,5-1,5 cm n'okpuru anụ ahụ iji rụọ ọrụ na anụ ahụ dị mma.
Infrared ìhè nwere ike ikpokọta ihe jikọrọ anụ ahụ iji mee ka ọmụmụ nke collagen na eriri na-agbanwe ngwa ngwa. Ọ nwekwara ike melite mgbasa ọbara na lymph iji kwalite metabolism.
Agụụ mgbanwe nwere ike inu arahụ zube ebe n'ime oghere n'etiti abụọ rollers nke bụ n'ezie 2 electrodes. Nke a nwere ike ịme ọgwụgwọ ahụ n'ụzọ ziri ezi na nke ọma.
Ndị na-agbagharị onwe ha na-etekwa ebe a na-emeso ọgwụ iji hapụ ike ọgwụgwụ na anụ ahụ mgbu. Usoro dum dị ọkụ ma dị ezigbo mma.
Mini Kuma Ọdịdị Pro 5-Na-1 Isi Contouring Machine
Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Ngwaọrụ na-elekwasị anya na nhazi ahụ, nkwenye na mbelata abụba.
a) Nkpụzi ahụ: Ebumnuche bụ ịmegharị ahụ na-elekwasị anya na mpaghara nsogbu. Ọ na-enyekwa mmelite nke mgbasa anụ ọkụ, nsị mmiri lymphatic, mkpali nke collagen na elastin.
b) Mbelata abụba: Ọ na-ebelata site na 70 ruo 80% nke cellulite.
c) Nkwado: Site na mbenata ọdịdị nke cellulite na imebi adiposities dị na mpaghara ahụ, akpụkpọ ahụ na-efunahụ ụda ma bụrụ obere ụkwụ, ọnọdụ nke ọgwụgwọ a na-egbochi.
Mini Kuma Shape Pro 5-In-1 Ngwaọrụ nabatara ọtụtụ teknụzụ nke Cavitation, Frequency Radio, Light Infrared, Pressure Negative and Mechanical Roller.
Kuma nkebisi Pro 5-Na-1 Isi Contouring Machine
Kuma Shape Pro Isi Contouring Ngwaọrụ na-arụ ọrụ na Nchikota 5 teknụzụ: Radio Frequency, Infrared Light, Cavitation, Negative Pressure and Mechanical Roller.
Ọgwụgwọ ahụ bụ usoro na-adịghị emerụ ahụ, nke na-eji mmiri na-adịghị mma na-ebuli elu iji bulie epidermis, derma na abụba subcutaneous, wee jikọta ma gbatịa anụ ahụ njikọta na cortex dị iche iche, nke nwere ike gbasaa abụba subcutaneous ma na-akụ ụgbọ mmiri, na na-akwalite metabolism nke anụ ahụ site na ngwa ngwa ugboro anọ. Ike na-ekpo ọkụ n'ebe a na-agwọ ọrịa na-eru gburugburu 43 Celsius Degree, nke na-akpata ịmepụta abụba. Fatty acids na-agbaze mkpụrụ ndụ abụba na mpaghara ọgwụgwọ n'oge ọgwụgwọ ahụ. A ga - amịpụta mkpụrụ ndụ abụba mebiri emebi site na ahụ site na mgbasa ozi metabolism nke ọma.
Site na isi ọgwụgwọ dị iche iche, nke jikọtara teknụzụ 5, a na-eme ọgwụgwọ ahụ, nke nwere usoro nke 5 ruo 10 nnọkọ na mpaghara ndị a ga-emeso oge 15 min ruo 2 awa, dabere na ọnụ ọgụgụ mpaghara .